Qurbajooga Waqooyiga Ameerica Oo Cambaareeyay Xadhiga Cuqaasha Iyo Baabiinta Beeraha Gargaraara.(Akhriso) -
Qurbajooga Waqooyiga Ameerica Oo Cambaareeyay Xadhiga Cuqaasha Iyo Baabiinta Beeraha Gargaraara.(Akhriso)
Qurbajooga degmada Lughaya ee ku dhaqan Waqooyiga Maraykanka ayaa cambaareeyay falkii ay ciidanka Booliska ee gobolka Awdal ku baabiiyeen beero ay dad maxali ahi eek u dhaqan gargaara ee ka badbaaday duufaantii Sagar ay ka qoteen degaanka Gargaara, iyo xadhiga odaydhaqameedyada degaankaas oo lagu xidhay Hargaysa.
Warqadan oo ku socotay beesha Caalamka ayaa waxa uu nuxurkeedu ahaa sidan
Qurbajooga degmada Lughaya eek u dhaqan Waqooyiga Ameerika waxa ay si xoogan u cambaaraynayaan ficilada arxanka daran ee Milatariga iyo Booliska maamulka Hargaysa ay kula kaceen dadka saboolka ah ee ku dhaqan degaanka Gargaara. Ficiladan ay ciidamadan Milatariga iyo Booliska ah ku kaceen ayaanay qurba-joogu u arkaan inay yihiin kuwo bani’aadanimada ka baxsan, cadaaladana ka fog oo loo gaystay dadkii ay duufaantii Sagar ee sanadkii 2018kii waxyeelaysay.
17kii May 2018 ayaa Duufaanta Sagar oo ku dhufatay degaanka Lughaya, waxa ay ahayd tii ugu xumayd ee abid ay soo marta Somaliland. Roobab mahiigaan ah oo ka dhashay duufaanta ayaa ku qasbay 1,700 qoys in ay barakacaan, ku dhawaad ​​700,000 oo dad ah ayaa u baahday gargaar bina aadamnimo, halka ay 3000 oo qoys ku waayeen guryahoodii. Sidoo kale waxa ay roobabkaasi doofaanta la socday waxyeeleeyeen Guryahii Iskuuladii, Jidadkii looga adeegi lahaa dadkaas.
Hay’adaha samafalka iyo dawladaha deriska ah gurmad laga helay ayaa gaadhsiiyay dadka nugul biyo nadiif ah iyo cuno aasaasi ah, iyo hu iyo baco ay ka samaytaan guryo macmal ah, nasiib darrose inta badan gargaarka bani’aadanimo waxaa la gaarsiiyay meelaha aysan roobabku saamayn ee dhinaca Hargaysa xiga. Tan ugu daran ayaase ahayd in kaalmada maaliyadeed ee ay ku deeqday Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo ururro kale oo caalami ah aysan ilaa hada gaadhin degaandii Lughaya ee ay duufaantu taabatay.
Dadka Degaanka Lughaya oo ay ka muuqato raadkii diifta iyo tamar darada ahaa ee ay kaga tagtay Duufaantaasi ayaa wajahay xaqiiqda jirta, waxana ay isku abaabuleen inay dhulka qotaan oo ay beero fashaan iyaga oo ka faaiidaysanaya biyaha socda iyo roobabka dhawaan la filayo inay ka da’aan gobolka, waxana ay tan ahayd sida kaliya ee ay ku quudin kareen naftooda iyo tan qoysaskooda.
Sikastaba ha ahaatee, Maamulka Magaalada Hargeysa ayaa amar ku siiyay gudoomiye gobolka Awdal in uu burburiyo dhulkii ay beeraha ka samysteen dadkii ka soo hadhay duufaantii Sagar iyo abaarahii ka horeeyay ee dadkaas baday macaluusha. Maalintii Talaadadii ee ay bisha Oktoobar ahayd 15, 2019, Booliska Hubaysan ee RRU waxaa loo diray Gargaara si ay u argagax geliyaan dadka deegaanka, una soo odayaasha dhaqanka ee maxalliga ah. Maanta, booliska danaha gaarka ah leh ee RRU waxay xero ka samaysteen meel masaafo dhan 15 kiiloomitir u jirta Gargaara si ay dadka u argagax galiyaan uguna qasbaan wax rabitaankooda ka baxsan oo cadaalad daro ah. Madax-dhaqameedii degaanka ee ay xidheena, way jidh-dileen waxana ay ku xidheen xabsi ku Hargeysa Oktoobar 17, 2019.
Hadana waxa aan ka codsanaynaa beesha caalamka iyo dawlada Federalka Soomaaliya in ay hubiyaan in:
La qaado cunaqabatynata dhaqaale ee ka dhanka Dadka degaanka Lughaya iyo guud ahaan dadka ku nool Awdal iyo Selel.
La damaanad qaado amniga dadka ku dhaqan gobolka iyada oo loo dirayo nabad ilaaliyayaal ka Qaramada Midoobay ama AMISOM.
Si dhakhso loo sii daayo hoggaamiye dhaqameedka ay xidheen Maamulka Hargeysa, kuwaas oo kala ah
Caaqil Daahir Cusmaan Cilmi
Caaqil Muuse Ceelaabe Abaar (Garaadka)
Caaqil Cali Faarax Xoosh
Caaqil Xasan Cabdi Rayaale (Xasan Gacan)
Caaqil Siciid Muxumed Cali
Caaqil Muuse Cali Yuusuf (Muuse October)
Caaqil Cismaan Maxamud Buuni (Afwayne)
Caaqil Ismaaciil Axmed Samaale (Af-mulacle)
Sheekh Aadan Samaale Khayre
War-Saxaafadeedkan waxa aan ku cadaynayanaa taareerada Buuxda ee aan la barbar taaganahay dadka maxaliga ah eek u dhaqan Gargaara, iyo dadka danyarta ah ee reer Awdal iyo Selel ee ku nool Waqooyiga Soomaaliya ee ay silica badeen Maamulka Hargeysa.
Waxaan wacad ku maraynaa in aan cadaalada caalamiga ah gaarsiindoono dadka ka masuulka falkan iyo falalka kale ee ka dhanka ah amiga wada jirka, iyo badbaadada dadkeena iyo dalkeena.
Warqadan waxa ay ka timid Magaalada Ottawa, Canada, ee Waqooyiga America
Sidoo kale Warqad tan la mid ah ayaa ka timid qurbajooga Awdal iyo Salal ee Waqooyiga America, waxaana uu nuxurkeedu ahaa canbaarayn ka dhan ah baabiinta beerihii Gargaara iyo xadhiga oday-dhaqmeedyada deegaanka Lughaya, iyagoo beesha caalamka iyo dawlada fadaraalka Somaliya ka dalbaday inay indhaha ku hayaan xaalada ka tagan deegaankaasi.
Joogitaanka Barasaab Cabdi Shaqaabaha Awdal Ee Degmada Lughaya Oo la Cambaareeyay.
Warbaahinta Muqdisho Oo Laga Mamnuucay Tebinta Wararka Kalfadhiyada Baarlamanka.
Maamulka Puntland ayaa magaalada Garawe kasoo musaafuriyay weriye Cumar Maxamed Soomane oo ahaa Wariyaha gaarka ah ee Madaxweynaha Puntland, kaa oo dhawaan xabsi kuyaala Garawe la dhigay. Wariye Cumar Soomane…
Dowlada Somaliya Oo Shir Xasaasi ah IGAD kula Yeelatay Muqdisho.(Sawiro)